Ma maqashay Sheekadii kala qabsatay Taageerayaal Kante kula kulmay MASAAJID uu ku Dukanayay kaddib kulankii ay Chelsea ka adkaatay Cardiff!!?? MUUQAAL+SAWIRRO – Gool FM
Byare September 18, 2018
(England) 18 Sab 2018. N’Golo Kante ayaa markale muujiyay inuu yahay mid ka mid ah xiddigha ugu dabciga fiican kubbada cagta kaddib markii uu aqbalay Casho ay u wadeen Taageerayaal kula kulmay Beydka Ilaahey.
Laacibka qadka dhexe ee Chelsea ayaa bandhig kale oo Cajiib ah la qaatay Blues kaddib guushii 4-1 ay ka gaareen Cardiff sabtidii si ay u sii wataan guulahooda 100% ay Premier League ku bilowdeen kal ciyaareedka Cusub.
Kaddib kulanka madaalaha reer France ayaa u jeedkiisu ahaa inuu Tareen u raaco dalkiisa hooyo.
Nasiib darro Kante ayaa seegay Tareenkii Eurostar, taa oo ku qasabtay inuu Google gareeyo Masaajidka ugu dhow si uu Salaada ugu sii dukado.
Taageerayaashii kula dukanayay Masjidka lama yaabin oo kaliya inay arkaan 27-jirka oo kula sugan Beydka ilaahey oo waxaa ka sii yaabiyay inuu aqbalay Casho ay ugu yeereen inuu gurigooda kula qaato.
Laacibkii hore ee Leicester City ayaa taageerayaasha u raacay gurigooda isla markaana la cunay Bariis iyo Digaag ka hor inta uusan la daawan goos goos kulamadii dhacay oo uu ka mid ahaa ciyaartii ay Chelsea afarta gool uga adkaatay Cardiff City.
“Ala muxuu nin yahay, Waa qeexitaanka dhabta ah ee qof aan kibir ku jirin,” Mid ka mid ah taageerayaasha ayaa sidaa ku soo qoray Twitter ka.